Ungalukhubaza njani uhlaziyo oluzenzekelayo kwiwindows 10 | Iindaba zeGajethi
IiVillamandos | | software, Tutorials, Windows
Windows 10 iseyeyona nkqubo ithandwayo kwintengiso, kwaye ikwathatha amanyathelo abalulekileyo ukuze ibe yeyona nkqubo isetyenziswayo kwihlabathi liphela. Konke oku kukhuthazwa ngumsebenzi omkhulu owenziwa nguMicrosoft ngesoftware yakhe, ekhulula uhlaziyo olutsha nolubalulekileyo amaxesha ngamaxesha.
Nangona kunjalo, olu hlaziyo aluthandi bonke abasebenzisi kwaye ngamanye amaxesha bavela ngamaxesha angafanelekanga okanye basinike imisebenzi kunye neempawu ezingasiniki mdla. Ke namhlanje siza kukubonisa Ungakhubaza njani ngokuzenzekelayo Windows 10 uhlaziyo ngokukhawuleza nangokulula.
1 Sebenzisa ukusetyenziswa kwemitha kunxibelelwano lwakho lwenethiwekhi yeWiFi
2 Ithintela Windows 10 Ukuhlaziya inkonzo ukuqala ngexesha elinye kunye nenkqubo ngokwayo
3 Windows 10 Ipatch yasekhaya, enye indlela yokukhubaza uhlaziyo oluzenzekelayo
4 Cima uhlaziyo oluzenzekelayo ngemigaqo-nkqubo yeqela lendawo
Sebenzisa ukusetyenziswa kwemitha kunxibelelwano lwakho lwenethiwekhi yeWiFi
Ngaphambi kokuchaza indlela le ndlela isebenza ngayo kufuneka sikuxelele loo nto isebenza kuphela ngeekhompyuter ezixhumeke kuthungelwano olungenazingcingoKe ukuba, umzekelo, ikhompyuter yakho iqhagamshelwe kwinethiwekhi ngentambo ye-ethernet, asinakuqinisekisa ukuba iyakusebenza, nangona ungazama ukuyizama.
Ku malunga vula uqhagamshelo lweWiFi olilinganiselwe iMeter, eya kusivumela ukuba sifake uhlaziyo ngexesha esilithandayo, ngaphandle kokukwenza ngexesha elingafanelekanga okanye embindini womsebenzi wethu. Ukwenza olu khetho lusebenze, kufuneka ukufikelela kuphela Windows 10 Uqwalaselo lweWiFi, apho kufuneka ucofe kukhetho olwenziweyo kwaye wakuba ukhethe ukhetho "lonxibelelwano olusetyenzisiweyo".
Ithintela Windows 10 Ukuhlaziya inkonzo ukuqala ngexesha elinye kunye nenkqubo ngokwayo
Windows 10 uhlaziyo luziphatha njengayo nayiphi na inkqubo ngaphakathi kwikhompyuter yethu, kwaye kumaxesha amaninzi sifumana isaziso sohlaziyo kwakamsinya nje xa siqala ikhompyuter yethu esinokhetho oluncinci xa sifaka.
Indlela elungileyo yokukhubaza Windows 10 uhlaziyo, kodwa okomzuzwana ubuncinci, ngu thintela inkonzo yokuhlaziya ukuqala ngaxeshanye nenkqubo. Ngenxa yoku kufuneka silandele la manyathelo alandelayo;
Cinezela ii-Windows kunye ne-R ngexesha elinye, uchwetheze apha ngezantsi services.msc kwibar yokwazisa kwaye ucofe u-Enter
Kuluhlu lweenkqubo ezibonisiweyo, khangela uHlaziyo lweWindows kwiWindows kwaye uyivule
Ngoku kwi-General tab khangela indawo "Uhlobo lokuqalisa" kwaye utshintshe "Khubaza"
Qala kabusha iPC kunye nohlaziyo oluzenzekelayo akufuneki lube yingxaki xa uqala ikhompyuter yakho
Ukuba nangaliphi na ixesha ufuna Windows 10 inkonzo yokuhlaziya ukuqala kwakhona ngaxeshanye nenkqubo, kuya kufuneka unike amandla kwakhona ukhetho esele sifunde ukukhubaza kulo.
Windows 10 Ipatch yasekhaya, enye indlela yokukhubaza uhlaziyo oluzenzekelayo
Njengokuhlaziywa kwenkqubo yokusebenza, uhlaziyo kwizicelo ezahlukeneyo esizifakayo kwivenkile esetyenziswa ngokusemthethweni yeWindows zihlala zifika kwelona xesha lifanelekileyo. Ukuthintela uhlaziyo oluzenzekelayo, vele ufake inani lokuhlaziya eliqokelelweyo lesi-5 lenkqubo entsha yokusebenza, Apho abo bavela eRedmond basinika ithuba lokukhubaza uhlaziyo lwesicelo oluzenzekelayo.
Ukwenza oku, kufuneka sibuyele kwakhona Windows 10 Imenyu yezicwangciso, fikelela "Hlaziya kunye nokhuseleko", emva koko ufake uhlaziyo lweWindows kwimenyu esezantsi. Apha kufuneka sijonge ukuba sizifakile kusini na Windows 10 iipatches ukuze sikwazi ukufikelela kukhetho lokucima uhlaziyo lwezicelo esizifakileyo kwikhompyuter yethu.
Ukugqiba kufuneka sivule usetyenziso lwevenkile kwaye ucofe kwiqhosha leprofayile kwibar yesixhobo. Kwicandelo loqwalaselo kukho icandelo elibizwa "Uhlaziyo lwesicelo" olusinika ukhetho "Hlaziya usetyenziso ngokuzenzekelayo". Ukuba asikhangeli olu khetho siya kube siyisombulule ingxaki yethu.
Cima uhlaziyo oluzenzekelayo ngemigaqo-nkqubo yeqela lendawo
Enye yezinto ezinqabileyo Windows 10 eze nayo, njengoko besesitshilo, yonke into enxulumene nohlaziyo, etshintshe kakhulu ngokuthelekiswa neenguqulelo zangaphambili zenkqubo yokusebenza ethandwayo. Yintoni egqithisile UMicrosoft uthathe isigqibo sokushiya ukhetho lokukhubaza uhlaziyo oluzenzekelayo olufihlwe ngokungagqibekanga.
Ngaphambi kokumiliselwa ukubonisa inketho enomdla yokungasebenzi kohlaziyo kwimigaqo-nkqubo yeqela lendawo, kufuneka sikuxelele ukuba olu khetho luya kusebenza kuphela Windows 10 Abasebenzisi bePro kunye noShishino, ngenxa yoko uninzi lwabasebenzisi, abasebenzisa Windows 10 Ikhaya, thina ngekhe sisebenzise olu khetho kwaye kuya kufuneka sigxile kwenye yezo sele sithethileyo ngaphambili.
Ukunciphisa uhlaziyo lweWindows ngale ndlela kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo;
Kwi-bar yokukhangela yeWindows kufuneka sibhale "uMhleli woMgaqo-nkqubo weQela laseKhaya" emva koko uyivule
Ngoku kufuneka ukhangele kwifolda «Iitemplate zoLawulo» kwicandelo «Uqwalaselo lweKhompyuter» kwaye ucofe kuyo ukuze ivule ngokupheleleyo
Kuya kufuneka ucofe kabini ku "Onke amaxabiso", ukuze uluhlu luvuleke apho kuya kufuneka sikhangele khona "Qwalasela uhlaziyo oluzenzekelayo". Nje ukuba uyifumane, cofa kuyo kabini
Khetha "Inikwe amandla" ukhetho kwizinto ezintathu eziboniswe kwikona ephezulu ngasekhohlo kwaye inkqubo iya kugqitywa, nangona kuya kufuneka uqale kabusha ikhompyuter yakho.
Windows 10 ayisiyiyo nkqubo isebenzayo kubo bonke abo bathanda okuncinci okanye bangabinanto yokuhlangana rhoqo kunye nohlaziyo olutsha, nangona kwangaxeshanye kuyeyona nto inomdla kuba iMicrosoft igcina isoftware yayo ihlaziywa rhoqo kwaye iphambili. Ngamaqhinga esikufundise wona namhlanje ubuncinci sinako ukugcina uhlaziyo lukhona, kwaye azifakwanga ngokuzenzekelayo.
Njengengcebiso kwaye okokugqibela kufuneka sikuncomele oko Nokuba awusebenzisi uhlaziyo oluzenzekelayo lwe Windows 10, kuya kufuneka ulumke uhlaziya ikhompyuter yakho amaxesha ngamaxesha kwaye ungazivezi nakweziphi iingozi ezininzi ezisongela uhlobo olutsha lwenkqubo yokusebenza yeMicrosoft yonke imihla.
Ngaba ukwazile ukukhubaza Windows 10 uhlaziyo ngempumelelo?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungakhubaza njani uhlaziyo oluzenzekelayo kwiwindows 10
Inqaku elihle. Kodwa ndinombuzo: ukuba sikhubaza inkonzo yokuhlaziya iiwindows, uhlaziyo lokhuseleko luye lwavalelwa? Ndingathanda ukukwazi ukugcina inguqulelo engu-1607 ihlaziywa kodwa ngaphandle kokuya ku-1703. Enkosi!
IAmazon ibhengeza iNkulumbuso ngo-2017 ngamawaka ezinto ezizodwa kunye nezaphulelo